ဝံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ (ဇာတ်သိမ်း) | ဥက္ကာကိုကို
၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ (ဇာတ်သိမ်း)	Posted by oakkarkoko on September 11, 2012
Posted in: သရော်စာ.	Leaveacomment
ဗွိုက်စကိုဒဂါးမား တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် ဒဂုံဘီယာတရားရုံးချိန်းနေ့မှာ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်နေ သည့် နင်ဂျာတွေ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှ တမျိုး၊ ရေနုတ်မြောင်းထဲမှ တဖုံ ၀ှီး ၀ှီး ၀ှစ် ၀ှစ်ဟု အော်ကာပေါ်လာကြပြန်သည်။ ရုံးရှေ့မှာ ရှေ့နေကြီးကိုတွေ့သည်။ ရှေ့နေခတွေကို ပုံးကြီးပုံးငယ် အသွယ်သွယ်ဖြင့် ရရှိထားသော ရှေ့နေကျော်ကြီးက လက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ ခါးတောင်း ကျိုက်ပြောသည်။
“”ကျုပ်တို့ မီဒီယာသမားတွေကို လူဝံတွေအနေနဲ့ လုံးဝ တရားမစွဲသင့်ဘူး… ဘူး ထွားထွား””
(နင်ဂျာများထောက်ခံသံ) “”ဟုတ်ပါတယ်ဗျို့… မှန်ပါတယ်ဗျို့””
ထုံးစံအတိုင်း အမှုက ဘယ်တော့မှမပြီးပြတ်။ တရားစွဲခံရသည့် ဗွိုက်စကိုဒဂါးမားကြီးကတော့ တရုတ်ပြည် မဟာတံတိုင်းဆီ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းဖြင့် ယတြာချေမည်ဟု ဆိုကာ ပုဆိုးလေးမ၍သုတ်ခနဲ လစ်သွား၏။
တရားရုံးရှေ့မှာ နင်ဂျာမတွေ ပို့စ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ကော့ကော့ကောက်ကောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပြန် သည်။ သဘောကောင်းပုံရသည့် နင်ဂျာတချို့ကို ကြွက်ကိုကို ကြွက်ညီညီတို့ မစ်ကီမောက်စ်သတင်းတပ်ဖွဲ့က လက်ဖက်ရည်တိုက်ကာ သတင်းနှိုက်သည်။ ဒီလူတွေက သတင်းနှိုက်မရလျှင် ဖင်နှိုက်မည့်လူတွေဖြစ်သည်။
(လူရွှင်တော် ကတုံးကြီးကတော့ လေဆိပ်မှာ ဖင်နှိုက်ခံရသဖြင့် “”ယီးဘဲကွာ”” ဟု ထဆဲခဲ့ဖူးသည်)။
နင်ဂျာတွေ တရားဝင်လမ်းလျှောက်ဖို့တိုင်ပင်ကြသည်။ ပြဿနာနည်းနည်းရှိသည်။ စာတော့တင်ရမည်။ ဒါကြောင့် ကျောက်တံတားစခန်းဆီ လေးဖက်ထောက်ချီတက်ခဲ့ကြသည်။ ခန်းမရှေ့ ကျောက်တိုင်နားပလက်ဖောင်းမှာ လူတွေသွားလာနေလို့ မပြပါနဲ့လို့ ရဲကိုကိုကပြောသည်။ လူရှင်းတဲ့လမ်းကြားလေးတစ်ခုမှာ ပြကြပါလားဟု သူကဆက်ပြောသည်။ မရဘူး… မရဘူး… မရဘူးလို့ နင်ဂျာတွေက သုံးကြိမ်ညီညီညာညာ အော်လိုက်ကြ၏။ ရဲကိုကို စိတ်တိုသည်။ ခွင့်ပြုချက်မပေးဘူးလို့ စာနဲ့အကြောင်းပြန်သည်။
““ဒါနဲ့များ…. ငါတို့နောက်ကြောင်းကို အတိအကျမေးမြန်းသွားသေးတယ်… လူဆိုး… ”” လို့ နင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေက ဒေါသထွက်ကြ၏။
““ ဒါပေမယ့် ငါတို့လည်း ပါးစပ်ထဲရှိတာ လျှောက်ဖြေလိုက်တာပဲ… ငှဲငှဲ…”” ဟု ပြန်ဖြေတွေးမိကြသည်။
“”အပ်ချလောင်း”” ဟု အော်ကာ ဘပြောင်က မျက်လှည့်ဝိုင်းထောင်လိုက်သည်။ သမ္မတရုံးမှ ၀န်ထမ်းများက ပါးစပ်ဆိုင်းတီးပေး၏။
“”ဗိန်နောင်… ဗိန်နောင်… စိန်ပလိမ်တိန်…. ပလို့ဂျိ””
ကာလအားဖြင့်သတ်မှတ်ရသော် ပြုတ်၊ ပြောင်း၊ ပြန် ခေတ်ဖြစ်လေ၏။
ပြုတ်သူကပြုတ်၊ ပြောင်းသူကပြောင်း၍၊ ပြန်သူက ပြန်ကြကုန်သည်။
၀ံသရမ်းကတော့ သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးကြီးဆိုတဲ့ဘွဲ့အတိုင်း မပြုတ်။ သမခံလိုက်ရပြီး သမဖက်ကို ရောက်သည်။ သူ့တပည့် ဒုဝံလည်း သသန ကိုရောက်လေသည်။
ပိုတာရောင်းစားတဲ့လူကြီးက ရောင်းစားတာလက်လွန်လို့ ပြုတ်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝံကြီးလည်း ဗြုတ်ဆို ပြုတ်သွားသည်။ ဘိလပ်မြေနှင့် သံချောင်းတွေ သွားစားမိ လို့ ၀မ်းလျှောတာဖြစ်နိုင်သည်။
ကျန်သည့် ၀ံကျီးတွေ သီချင်းသံပြိုင်ဆိုရင်း ထိုင်ခုံပြောင်းထိုင်ကြသည်။
““ဟိုဖက်တိုးလိုက်… ဒီဖက်တိုးလိုက်… တိုးရင်းနဲ့ ကလိုက်… ကရင်းနဲ့တိုးလိုက်… ရို့ ရို့””
(တီးလုံးကိုသမ္မတရုံးက ပါးစပ်ဆိုင်းဖြင့် တီးပေးသည်။)
သမ္မတကြီးက “အပ်ချလောင်း”ဟု အော်လိုက်သောအခါ တော်တော်များများ ၀ုန်းခနဲ ဒုဝံတွေဖြစ်ကုန်သည်။ ယောက်ျားဘသားဟူ၍ လက်ခမောင်းထခတ်ကြ၏။ သမ္မတရုံးမှာ ၀ံလေးယောက်ဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်ထိုင်ခုံလိုသည်။ ခုံမလောက်လျှင် ထထိုးကုန်မည်။ စီးပွားရေးအကွက်မြင်သည့် ကုလားထိုင်ရောင်းသူ တချို့နေပြည် တော်ဆင်းသွားပြီကြားသည်။
နင်ဂျာတို့အသည်းကျော် ၀ံသရမ်းကတော့ “မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့တိုက်လို့မရ”ဟု သံဝေဂလေးဖြင့် မျက်ရည်တ၀ဲဝဲ လစ်သွားသည်။
သူ့ခုံမှာ နအဖခေတ်တုန်းက သူပဲဝံကြီး၊ သူပဲညွှန်ချုပ်၊ သူပဲစာရေး၊ သူပဲပြာတာ၊ သူပဲရုံးစောင့် တစ်ယောက်တည်း သူပဲလုပ်ခဲ့သည့် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ၀င်ထိုင်သည်။ ထိုင်ထိုင်ချင်း ထခုန်သည်။
““အရင်ဝံကြီးကတော့ အဲ့ဒီကြမ်းပိုးတွေကို လိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တာဘဲ။ အဘလည်း တစ်ကောင်ကောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့””
သို့နှင့် ပျံကျားရေးဝံအသစ်စက်စက်မှာ ထိုင်ခုံမှ ကြမ်းပိုးများကို ဘာကောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရသော် ကောင်းအံ့နည်းဟုသာ ငုတ်တုတ်ထိုင်တွေးနေရရှာလေ၏။
၀ံသရမ်းတိုက်ပွဲကို ကိုးရို့ကားရားဆင်နွှဲခဲ့ကြသော ဒေါက်တိုင်နင်ဂျာတချို့ အပျော်လုံးဆို့ပြီး တောင်ပြုန်းမှာ နတ်ကန္နားသွားကကြသည်ဟုလည်း သိရသည်။
၀ံသရမ်းလည်း သမခံရပြီ။ နင်ဂျာတို့၏ ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီ။
တောင်ပြုန်းပွဲပြန် နင်ဂျာတချို့ လုံးရာကပြား၍ လိုင်းဝင်ကုန်သည်သာ အဖတ်တင်လေတော့ သတည်း။ ။
နံပြားအားလုံးကို ခွေးစားပါဒယ်… ပလို့ဂျိ။
ဥက္ကာကိုကို၊ သံချောင်း၊ မင်းထက်စံ
(သရော်စာသက်သက်ဖြစ်၍ မည်သည့်ထိခိုက်နစ်နာစေလိုမှုမှ မပါဝင်ပါကြောင်း)
← ““၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ (၂)””	စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ… →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...